राजपाले सहमति गरे मधेशीसंग इमान्दारी, समाजबादीले गरे गद्धारी ? महतो नेकपा निकट नेता ! – Sanghiya Online
राजपाले सहमति गरे मधेशीसंग इमान्दारी, समाजबादीले गरे गद्धारी ? महतो नेकपा निकट नेता !
Posted on : December 19, 2019 December 19, 2019 - No Comment
काठमाडौ । बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ । हुन् त समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोसँग पनि यो कुरा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार दुई दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको वार्तामा राष्ट्रियसभाको प्रदेश २ अन्तर्गतका सिटको बाँडफाँट भएको हो ।राष्ट्रियसभामा प्रदेश २ का ८ मध्ये चार सिट २० फागुनबाट खाली हुँदैछ । उक्त पदमा ९ माघमा निर्वाचन हुनेछ । सहमतिअनुसार राजपाले अन्य पुरुष र अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहको सिट लिनेछ भने नेकपाले महिला र दलित पुरुष लिनेछ । यो सहमतिसँगै दुबैको जित पक्काजस्तै बनेको छ । एकीकरणको समेत कुरा चल्दचल्दै कसरी राजपाले नेकपा संग सहमति गर्यो त ? यी प्रश्नले खास गरेर मधेशमा आगो फुकेको छ ।
राजपाको संयोजक राजेन्द्र महतो हुँदा नै किन भयो सहमति ?
यो प्रशन नै सबै भन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ । यदि बिगतका केहि कुराहरुको सम्झना गर्ने हो भने महतो तत्कालिन एमाले निकट वा केपी ओली निकट भएको पुष्टि हुन्छ । आफूलाई कसैले एमाले निकट नभनोस त्यसका लागि महतोले मधेश आन्दोलन चलि रहदा काठमाडौँ नफर्कने कसम नै खाएका थिए । सबैले महतोलाई मधेशको मसिहा र कांग्रस र तत्कालिन एमालेका ठूलो शत्रु नै ठानेका थिए । हुन् पनि हो महतोले कडा कडा शब्दमा एमालेको बिरोध गरेको थियो । तर जनताले त्यति बेला थाहा पाए महतोको असली चरित्र जति बेला महतो मधेश आन्दोलन कै बेला इण्डिया अर्थात दिल्लीबाट सोझै प्रधानमन्त्रि निवास बालुवाटार पुगेका थिए । र संचारकर्मीले तपाइँले कसम खानु भएको थियो काठमाडौँ नफर्कने तर किन आउनु भयो भनेर प्रश्न गर्दा महतोले उतरमा जवाफ दिएका थिए -“प्रधानमन्त्रीले बोलाएर आएको हुँ । त्यति मात्र होइन महतो चुनाबमा हार्ने भएपछी एमाले संग नै सहयोग मागेका थिए र एमाले कै सहयोगमा जितेका हुन । अहिलेको सरकारलाई राजपाले समर्थन समेत गरेकै हो त्यो पनि कुनै मन्त्रि नलीकन । किन गरे त सहयोग ? मात्र केपी ओलीको कुरा काट्न नसकेर । तर बेला बेलामा मधेशी जनतालाई झुक्याउन सरकार बिरोधी गतिबिधि राजपाले गरिराख्छ ।
जानकार बताउछन राजपाले जानाजान उपनिर्वाचनमा समाजबादी संग तालमेल नगरेको हो । तालमेल गरेको भए पिपरामा केपी ओलीको निकटका उम्मेदवार जित्दैन थियो । केपी कै इशारामा राजेन्द्रले भूमिका खेली आफ्नो र समाजबादीको उम्मेदवारलाइ हराएको हो । अब नेकपालाई भन्ने ठाउ छ कि पिपरा मै हाम्रो उम्मेदवार जितेको छ । त्यही उपचुनाबको सहयोगलाइ ध्यानमा राखी महतोले आफ्नो ध्यान नेकपातिर सोझ्याएको राजपा नेपाल निकटका एक नेताले नाम नलेख्ने सर्तमा भनेका छन् । त्यति बेलाको पालाको पैचो तिर्ने बेला आएको कुरा नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानसम्म पुग्यो । उनले आफ्ना पक्षका नेताहरुलाई राजपा नेपालका संयोजक महतोसंग कुरा गर्न लगाएका थिए । र एक घन्टा भित्र भयो सहमति । यहि सहमति समाजबादीले गरेको भए राजपाका नेताहरुले गद्धारी भन्थे तर अहिले नेकपा संगको सहमतिलाई उनीहरुले मधेशी संग इमान्दारी देखाएको भनिरहेका छन् ।
सदभावनाको वडा एकाइ कमिटी गठन अध्यक्षमा वर्णवाल चन्दन
ठोरीलाइ अलग प्रदेशमा गाभ्ने प्रचण्ड र कार्यकर्तालाई वीरगन्जमा उभिन नदिने फोरमको चेतावनी
अज्ञात समुहको निशानामा माओबादी केन्द्र, नवलपराशीमा बम बिष्फोट्, ६ घाइते, ३ को अवस्था गम्भिर
दुहवीको १२ वडा मध्ये ३ ओटा वडामा एमालेको जित
सद्भावको संदेश दिदै मुस्लिम संस्थाले गरे एकल बिध्वा महिलाहरुलाई न्यानो कपडा वितरण